တဈရကျထဲမှာပဲ မိဘမဲ့ ကလေးငယျလေး (၃) ယောကျ ကို မှေးစားစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ – Cele Lover
တဈရကျထဲမှာပဲ မိဘမဲ့ ကလေးငယျလေး (၃) ယောကျ ကို မှေးစားစောငျ့ရှောကျပေးခဲ့တဲ့ ခိုငျနှငျးဝေ
ဖွူစငျတဲ့ပရဟိတနှလုံးသာလေးကို ပိုငျဆိုငျထားပွီးတော့ ပရိသတျတှအေားလုံး လေးစားခဈြခငျနရေတဲ့ ခိုငျနှငျးဝဆေိုတာ ဒိတျဒိတျကွဲ မငျး သမီးလေးတဈလကျပါပဲနျော။ အခုအခြိနျမှာဆိုရငျသူမဟာ လူမှုကူညီရေးပရဟိတလေးတှတေငျသာမက မိဘမဲ့ ကလေးလေး တှအေ တှကျ လညျး မိခငျအရငျးသဖှယျ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှနေဲ့ စှမျးသလောကျစောငျ့ရှောကျမှုတှပေေးနခေဲ့ပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝရေငျသှေးလေးမြားဂဟော ဆိုပွီး ဂဟောလေးတဈခုကိုတညျထောငျထားကာ အကူအညီလိုအပျနတေဲ့ကလေးလေးတှကေို မတ်ေတာနဲ့ ဖေးမပွီး နှေးထှေးတဲ့ရငျခှငျတဈစုံကိုပေးကာ စောငျ့ရှောကျပေးနတောပါ ။ကလေးလေးတှရေဲ့ ပညာရေး ကနျြးမာရေး စတဲ့ ကိစ်စအ၀၀မှနျသ မြှ ကို ခိုငျနှငျးဝကေ တာဝနျယူပွီး ပွုစုပြိုးထောငျပေးနတောပဲဖွဈပါတယျ။
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့စှနျ့ပဈခံရတဲ့ ကလေးလေးတှကေို ကွငျနာတဲ့နှလုံးသားအပွညျ့နဲ့ မှေးစားကယျဆယျခဲ့တာဖွဈပွီးအခုလညျး တဈရကျထဲမှာပဲ ကလေးငယျလေး (၃) ယောကျကို မှေးစားစောငျ့ရှောကျဖွဈခဲ့ကွောငျးခုလိုပုံလေးတှနေဲ့တကှဖျောပွထားတာဖွဈပါတယျ။” ဒီနေ့ တရကျထဲ သားသမီး (၃) ယောကျ မှေးစားဖွဈပါတယျရှငျ…..သားလေး (၂) ယောကျ နဲ့ သမီးလေး (၁) ယောကျပါ…
လူမြိုးမရှေး၊ ဘာ သာမရှေး ဆိုးသညျ ကောငျးသညျ မရှေးပဲ လူ့အသကျ တခြောငျးကို တနျဘိုးထား၍ ကယျတငျခွငျးမှာ ကမြ ခံယူခကျြ ဖွဈပါတယျ. .ကလေး တှေ အနာဂတျ အတှကျ ပွုစုပြိုးထောငျဘို့ အားမှေးရငျး ဒီနတေ့ော့ ကမြ ကလေး (၃) ယောကျတောငျ မှေးစားပဈ လိုကျပါပွီ ရှငျ..”ဆိုတဲ့စာ လေးကိုရေးသားဝမြှေခဲ့ရာ လေးစားမိလှနျးတာကွောငျ့ ပရိသတျကွီးအတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
တစ်ရက်ထဲမှာပဲ မိဘမဲ့ ကလေးငယ်လေး (၃) ယောက် ကို မွေးစားစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ဖြူစင်တဲ့ပရဟိတနှလုံးသာလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ ပရိသတ်တွေအားလုံး လေးစားချစ်ခင်နေရတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေဆိုတာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ မင်း သမီးလေးတစ်လက်ပါပဲနော်။ အခုအချိန်မှာဆိုရင်သူမဟာ လူမှုကူညီရေးပရဟိတလေးတွေတင်သာမက မိဘမဲ့ ကလေးလေး တွေအ တွက် လည်း မိခင်အရင်းသဖွယ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ စွမ်းသလောက်စောင့်ရှောက်မှုတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာ ဆိုပြီး ဂေဟာလေးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားကာ အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ကလေးလေးတွေကို မေတ္တာနဲ့ ဖေးမပြီး နွေးထွေးတဲ့ရင်ခွင်တစ်စုံကိုပေးကာ စောင့်ရှောက်ပေးနေတာပါ ။ကလေးလေးတွေရဲ့ ပညာရေး ကျန်းမာရေး စတဲ့ ကိစ္စအ၀၀မှန်သ မျှ ကို ခိုင်နှင်းဝေက တာဝန်ယူပြီး ပြုစုပျိုးထောင်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စွန့်ပစ်ခံရတဲ့ ကလေးလေးတွေကို ကြင်နာတဲ့နှလုံးသားအပြည့်နဲ့ မွေးစားကယ်ဆယ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလည်း တစ်ရက်ထဲမှာပဲ ကလေးငယ်လေး (၃) ယောက်ကို မွေးစားစောင့်ရှောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းခုလိုပုံလေးတွေနဲ့တကွဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။” ဒီနေ့ တရက်ထဲ သားသမီး (၃) ယောက် မွေးစားဖြစ်ပါတယ်ရှင်…..သားလေး (၂) ယောက် နဲ့ သမီးလေး (၁) ယောက်ပါ…
လူမျိုးမရွေး၊ ဘာ သာမရွေး ဆိုးသည် ကောင်းသည် မရွေးပဲ လူ့အသက် တချောင်းကို တန်ဘိုးထား၍ ကယ်တင်ခြင်းမှာ ကျမ ခံယူချက် ဖြစ်ပါတယ်. .ကလေး တွေ အနာဂတ် အတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ဘို့ အားမွေးရင်း ဒီနေ့တော့ ကျမ ကလေး (၃) ယောက်တောင် မွေးစားပစ် လိုက်ပါပြီ ရှင်..”ဆိုတဲ့စာ လေးကိုရေးသားဝေမျှခဲ့ရာ လေးစားမိလွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Previous Article ဒူးနာ လကျတှပြေ့ောကျခဲ့တဲ့ ကိုယျတှေ့ ဆေးနညျး
Next Article မနောမယ တဈလစာဟောစာတမျး